Dowlada Kenya oo dhoor qof usoo xirtay Weerarkii Westgate Mall iyo dadka lasoo qabtay oo su’aalo adag la weydiinayo. - jornalizem
Dowlada Kenya oo dhoor qof usoo xirtay Weerarkii Westgate Mall iyo dadka lasoo qabtay oo su’aalo adag la weydiinayo.
Dowlada Kenya ayaab shaacisay in wali dalkaasi uu kasocdo howlgalo lagu baadi goobayo dad la tuhmayo in ay ku lug lahaayeen weerarkii Qasaaraha badnaa ee lagu qaaday Xarunta ganacsiga Westgate Mall ee Magaalada Nairobi.
Wasiirka arimaha gudaha dalka Kenya Josef ole lenko ayaa sheegay in Ciidamada amaanka dalka Kenya ay gacanta kusoo dhigeen 8-qof oo lala xiriirinayo weerarkii ay Al-shabab ay ka geesteen Xarunta Westgate Mall ee magaalada Nairobi .
Wasiirka ayaa xusay in sadax kamid ah dadka lasoo xiray lasii daayay kadib Su’aalo adag oo la weediyo halka uu sheegay in shanta kale ay wali xiran yihiin ayna ku socdaan baaritaano dheeraad ah , waxauuna intaa raaciyay wasiirka in ay sii xirnaan doonaan dadka la tuhmayo inta ay arintooda ka cadaan doonto.
Josef ole lenko ayaa sidoo kale sheegay in dadkan ay gacanta ku hayaan la marsiin doono sharciga Kenya uga yaal la dagaalanka waxa loogu yeero Argagaxisada.
Todobaad kahor Bartmaha Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya waxaa ka dhacay Weerar lagu qaaday xarun ganacsi , waxaana weerarkaasi oo dhaliyay qasaarooyin lixaad leh sheegatay kooxda Al-Shabaab oo iyadu dagaalada kawada gudaha Soomaaliya.